GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ị̀ GA-AGỤTALI asụsụ Hibru e ji dee Baịbụl? O nwere ike ị gaghị agụtali ya. O nwedịrị ike ị hụtụbeghị Baịbụl e dere n’asụsụ Hibru mbụ. Ma, e nwere ihe nwere ike inyere gị aka iji Baịbụl i nwere kpọrọkwuo ihe. Olee ihe ọ bụ? Ọ bụ ịgụ gbasara otu onye ọkà mmụta dịrị ndụ n’ihe dị ka narị afọ ise gara aga nakwa Baịbụl Hibru abụọ o bipụtara. Aha ya bụ Elias Hutter.
A mụrụ Elias Hutter n’afọ 1553 n’obere obodo a na-akpọ Görlitz. Obodo a dị nso n’ókè mba Jamanị, Poland na Chek Ripọblik. Hutter mụrụ asụsụ Arabik, Hibru na Aramaịk na Mahadum Lutheran dị na Jena. Mgbe ọ dị naanị afọ iri abụọ na anọ, ọ ghọrọ prọfesọ n’asụsụ Hibru n’obodo Leipzig. Elias Hutter chọrọ ịgbanwe otú agụmakwụkwọ si na-aga n’oge ya. N’ihi ya, o mechara mepee otu ụlọ akwụkwọ n’obodo Nurembeg. N’ụlọ akwụkwọ a, a na-eji afọ anọ mụọ asụsụ Hibru, Grik, Latịn na Jamanị. E nweghị ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mahadum ọzọ na-emeli ụdị ihe a n’oge ahụ.
“IHE MERE BAỊBỤL Ọ SỤGHARỊRỊ JI MAA EZIGBO MMA”
Ihe a bụ isimbido peeji nke Baịbụl ahụ Hutter sụgharịrị n’asụsụ Hibru n’afọ 1587
N’afọ 1587, Hutter bipụtara ihe ọtụtụ ndị na-akpọ Agba Ochie ọ sụgharịrị n’asụsụ Hibru. Aha ọ kpọrọ Baịbụl a bụ Derekh ha-Kodesh. Ihe ọ pụtara bụ “Ụzọ nke Ịdị Nsọ.” E si n’Aịzaya 35:8 nweta ya. Otú mkpụrụ akwụkwọ e ji dee ya si maa mma mere ka ndị mmadụ kwuo na “ihe niile gbasara Baịbụl a mara ezigbo mma.” Ma, ihe kacha mee ka ọ maa mma bụ n’ihi otú o si e nyere ụmụ akwụkwọ aka ịmụta asụsụ Hibru.
Ka i nwee ike ịghọta ihe mere Baịbụl a ji maa mma, legodị ihe abụọ mere o ji esiri onye na-amachaghị asụsụ Hibru ike ịgụ Baịbụl e dere n’asụsụ Hibru. Nke mbụ bụ na e ji mkpụrụ akwụkwọ dị iche ọtụtụ ndị na-amaghị dee ya. Nke abụọ bụ na okwu a gbakwunyere n’ihu ma ọ bụ n’azụ okwu dị iche iche mere ka ọ na-esi ike ịmata nke bụ okwu bụ́ isi. Dị ka ihe atụ, tụlee okwu Hibru a sụpere ne’phesh (otú e si dee ya na Hibru bụ נפשׁ), nke pụtara “mkpụrụ obi.” N’Ezekiel 18:​4, a gbakwunyere okwu Hibru a sụpere ha (otú e si dee ya na Hibru bụ ה) n’ihu okwu Hibru ahụ a sụpere ne’phesh, ya aghọọ okwu bụ́ han·ne’phesh, (otú e si dee ya na Hibru bụ הנפשׁ), ya bụ, “mkpụrụ obi.” Onye na-amachaghị agụ asụsụ Hibru a e ji dee Baịbụl nwere ike iche na okwu bụ́ han·ne’phesh (הנפשׁ) dị iche na ne’phesh (נפשׁ).
Iji nyere ụmụ akwụkwọ ya aka ịna-amata okwu bụ́ isi na okwu ndị a gbakwunyere agbakwunye, Hutter bidoro ibipụta okwu Hibru n’ụzọ pụrụ iche. O dere okwu Hibru ndị bụ́ isi ná mkpụrụ akwụkwọ okpotokpo, deekwanụ okwu mgbakwunye na-adị n’ihu ma ọ bụ n’azụ okwu ndị ahụ bụ́ isi ná mkpụrụ akwụkwọ na-agbaghị okpotokpo. Otú a o si dee ya mere ka ọ dịkwuoro ndị na-amụ asụsụ Hibru mfe ịmata okwu Hibru ndị bụ́ isi, ya enyeziere ha aka mgbe ha na-amụ asụsụ a. E si otú ahụ Hutter si dee mkpụrụ okwu Hibru dee okwu ndị dị n’ala ala peeji nke New World Translation of the Holy Scriptures​—⁠With References. * E dere okwu ndị bụ́ isi ná mkpụrụ akwụkwọ gbara okpotokpo, deekwanụ ndị a gbakwunyere n’ihu ma ọ bụ n’azụ ha ná mkpụrụ akwụkwọ na-agbaghị okpotokpo. Foto dị na peeji a gosiri otú e si dee ihe dị n’Ezikiel 18:4 na Baịbụl ahụ Hutter sụgharịrị n’asụsụ Hibru, nakwa otú e si dee okwu ndị dị n’ala ala peeji nke amaokwu a na New World Translation of the Holy Scriptures​—⁠With References.
“AKWỤKWỌ NSỌ GRIK” E JI ASỤSỤ HIBRU SỤGHARỊA
Hutter bipụtakwara Akwụkwọ Nsọ Grik, bụ́ ihe ọtụtụ ndị na-akpọ Agba Ọhụrụ. I mepee ya, amaokwu ọ bụla dị na ya dị n’asụsụ iri na abụọ. O bipụtara ya na Nurembeg, n’afọ 1599. Ihe a na-akpọkarị ya bụ Nuremberg Polyglot. Mgbe Hutter na-akwadebe ibipụta Baịbụl a, ọ chọrọ ka otu n’ime ya bụrụ nke a sụgharịrị n’asụsụ Hibru. Ma, o kwuru na ọ bụrụgodị na ya “dị njikere ịkwụ nnukwu ụgwọ” iji nweta Baịbụl Hibru a, ọ gaghị abara ya uru. * N’ihi ya, o kpebiri iji aka ya sụgharịa Akwụkwọ Nsọ Grik ahụ n’asụsụ Hibru. Ọ hapụrụ ihe niile ọ na-eme malite ịsụgharị ya. O were ya naanị otu afọ iji sụgharịchaa ya.
Olee otú Baịbụl a Hutter sụgharịrị maruru ná mma? Otu onye ọkà mmụta aha ya bụ Franz Delitzsch, nke dịrị ndụ n’ihe dị ka narị afọ abụọ gara aga kwuru, sị: “Baịbụl Hibru ọ sụgharịrị gosiri na ọ ma asụsụ Hibru nke ọma, ọ bụ eziokwu na ọtụtụ Ndị Kraịst amaghị ya nke ọma. Baịbụl a ka bara uru taa. Ọ sakwara anya ná mmiri họrọ okwu ndị dabara adaba sụgharịa ya.”
Ọ BAALA EZIGBO URU TAA
Baịbụl a Hutter sụgharịrị emeghị ka ọ baa ọgaranya n’ihi na ọ ga-abụ na ọ gachaghị ahịa. Ma, ọ baala ezigbo uru taa. Dị ka ihe atụ, William Robertson dezigharịrị ma bipụta ya n’afọ 1661. N’afọ 1798, Richard Caddick mekwara otu ihe ahụ. Mgbe Hutter na-asụgharị Akwụkwọ Nsọ Grik ahụ gaa n’asụsụ Hibru, ọ hụ ebe e dere utu aha bụ́ Kyʹri·os (Onyenwe Anyị) na The·osʹ (Chineke), ya edee ya “Jehova” (יהוה, JHVH) ma ọ bụrụ na e si n’Akwụkwọ Nsọ Hibru nweta ihe ahụ ọ na-asụgharị. Ọ hụkwanụ ebe o chere na ọ bụ Jehova kwesịrị ịdị ya, ya edee ya Jehova. Ihe a o mere dị mma n’ihi na ọtụtụ ndị sụgharịrị Akwụkwọ Nsọ Grik wepụrụ aha Chineke ebe ndị o kwesịrị ịdị. Baịbụl ahụ Hutter sụgharịrị nyere aka mee ka a mata ebe ndị aha Chineke kwesịrị ịdị n’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst.
Mgbe ọ bụla ị na-agụ Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst hụ ebe e dere aha Chineke, bụ́ Jehova, ma ọ bụ hụ ya n’ihe e dere n’ala ala peeji nke New World Translation of the Holy Scriptures​—⁠With References, cheta Elias Hutter na ọ marịcha Baịbụl ndị ahụ ọ sụgharịrị n’asụsụ Hibru.
^ para. 7 Lee ihe nke abụọ e dere n’ala ala peeji n’Ezikiel 18:4 nke New World Translation of the Holy Scriptures​—⁠With References na Appendix 3B nke Baịbụl a.
^ para. 9 E nwere ndị ọkà mmụta ndị ọzọ sụgharịrịla Akwụkwọ Nsọ Grik n’asụsụ Hibru. Otu n’ime ha bụ Simon Atoumanos. Ọ sụgharịrị nke ya n’ihe dị ka afọ 1360. Onye ọzọ bụ onye Jamanị aha ya bụ Oswald Schreckenfuchs. Ọ sụgharịkwara nke ya n’ihe dị ka afọ 1565. Ma, e bipụtaghị Baịbụl ndị a. E nweghịkwa ebe a ga-ahụ ha taa.
Nsụgharị Baịbụl Dị Iche Iche Ndị Sụgharịrị Baịbụl Akụkọ Mere Eme na Baịbụl